भ्रष्टाचारमुक्त दशकको परिकल्पना
As of Fri, 03 Apr, 2020 01:35
ट्रान्सफरेन्सी नेपालले गरेको विगत १० वर्षदेखिको भष्टाचारको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने विश्वका १ सय ७५ देशहरूको तुलनामा सन् २०१० मा नेपाल १४६ औं स्थानमा छ भने सन् २०१० देखि १२ सम्मको तथ्यांकको आधारमा फेरि बढेर १५४ औं स्थानमा छ । यो सन् २०१२ भित्र सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नल नेपाल (टीआई) नेपालको तथ्यांकमा उल्लेख छ । फेरि सन २०१२ देखि २०१४ सम्मको भ्रष्टाचारको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने १३९ हुँदै ११६ औं स्थानसम्म आइपुगेको छ । पछि फेरि बढेर १२६, १३० हुँदै १३१ औंसम्म बढेर सन् २०१६ सम्म आइपुगेको छ ।
त्यसपछि २०१६ देखि २०१८ सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने १२२ हुँदै बढेर भ्रष्टाचार १२४ औं स्थानमा रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले यो तथ्यांक सन् २०१० देखिलाई आधार मानेर सन् २०१८ सम्ममा आउँदा भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकमध्ये नेपाल उच्च स्थानमा रहेको देखिन्छ । हाम्रो देश भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकै कारण पनि यहाँ खुल्ला सिमाना छ । सबै जात जाति धर्म संस्कृति सम्प्रदाय रीतिरिवाज तथा विभिन्न भाषाभाषीको संगमस्थल तथा एकै जातका फूलबारी जस्तै भएर बसोबास गरेको देश नेपाल हो भने यहाँ बस्ने हामी सबै नेपाली हौं । अर्को शब्दमा भन्दा हामी सबै चार जात छत्तीस वर्णका साझा फूलबारी समेत हौं । राज्य सञ्चालन गर्ने शक्ति नै कमजोर भएको अवस्था छ । यी भ्रटाचारको खाडल नपुर्ने हो भने मुलुक कहिल्यै विकास र समृद्धितर्फ जान सक्दैन । अत्याधिक भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा पनि छिमेकी मुलुकले यतिसम्म फाइदा उठाउँछन् की हाम्रो देशमा धेरै ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए ।
त्यसैको मौका छोपेर छिमेकी राष्ट्रले परापूर्वकालमा सुगौली सन्धीको नाममा हाम्रै देशका सरकार प्रमुख गएर पहिल्यै नै छिमेकी राष्ट्रसँग खुला व्यापार पारहवन सम्झौता सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने कामहरू भए । त्यहाँ बेलादैखिनै धेरैचोटि राजनिति परिवर्तनले सरकार परिवर्तन भए । राजनिति दलका नेताहरू छिमेकी देशको भ्रमणमका जाने बिभिन्न राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने । जनताको मर्म बिपरित छिमेकीसँग साँठ गाठ गर्ने प्रविद्धिले गर्दा आज हाम्रो देशको हज्जारौं हेक्टर भूमि छिमेकीले रातारात मिचिरहैको छ । केही महिनाअघि मात्रै छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालको सुदूरपश्चिममा रहेको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो राजनीति नयाँ नक्सामा समावेश गरेको थियो । नेपाली जनताले यसको चौतर्फी विरोध गरे । यस बिसयमा राजनीति दलबीच चौतर्फी आलोचनापछि राज्यको तर्फबाट सर्वदलीय बैठक बसी यो सस्याको समाधान गर्न कुटनिति पहलबाट मात्र सम्भव हुने बताए । के यो आजसम्म समस्याको समाधान भयो त ? किन मौन छन् यस बिसयमा राज्य ? हाम्रो देशको सिमा रक्षाको विषयमा कस्तो पहल भइरहेको छ ? कूटनीति पहलका कुराहरू कहाँ पुगे ? यो विषयमा नेपाली जनताले प्रत्येक दिन फलोअप गर्नु जरुरी छ । हामी एक टुक्रा जमिन पनि कसैलाई दिने छैनौं, यो पूर्खाले आज्र्या सम्पत्ति हो यसको रक्षा गर्नु तपाईं हामी सबैको दायित्व हो । हामी नेपालीको बानी त हो, जब समस्या आइपर्छ तव जरो उखल्न लाग्छ । अहिलेको राजनिति बिकराल अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपाली जनताले हरेक ठाउँमा सास्ती मात्र भोग्नुपरेको अवस्था छ ।
ठूला कामहरूको त कुरै नगरौं जाबो सानोतिनो काममा पनि हरेक ठाउँमा पैसा नखुवाई कुनै काम बन्ने अवस्था देखिँदैन । जहाँतहीँ बिचौलिया छन । यातायात कार्यालयमा होस्, मालपोत कार्यालयमा होस, नापी विभागमा होस्, सरकारी अड्डा अदालत जहाँतही भ्रष्टाचार छन् । सुनको तस्करीको सेटिङ, लागुऔषध कारोबार गिरोहको सक्रियता, चोरी डकैतिको सेटिङ तथा बिभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार, बेथिति र बिसङ्गति । अनि कसरी मुलुकमा बिकास र समृद्धि आउँछ ? यतिसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचारले सिमा नाघिसक्यो कि मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा समेत धब्बा लागिककेको अवस्था छ । नायब सुब्बा देखि ठूलाठूला तहका कर्मचारीहरूमा समेत यसको प्रभाव देखियो । जव सम्म यस भ्रष्टाचारको खाडल पुर्न सकिँदैन भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्न सकिर्दन तबसम्म मुलुक विकास र समृद्धि हुन सक्दैन । विकास र समृद्धिको बाधक नै भ्रष्टाचार, अनि बिचौलिया मौलाउनु हो । गत वर्षको ट्रान्सफरमेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको तथ्याङ्क लाई हेर्ने हो भने हाम्रो देश भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको शिर्ष स्थानमा छ । अमेरिका, बेलायत, चीन, सिङ्गापुर, अष्टे«लिया जापान, कोरिया, हङकङ दक्षिण युरोपका देशहरूलगायत धरै देशहरू विकसित देशका सूचीमा छन ।
किन भने जुन देशमा बिकसित हुन्छ समृद्धि हुन्छ, आर्थिक वृद्धिदर बढी हुन्छ, त्यस देशको भ्रष्टाचार पनि शून्य हुन्छ । विकसित मुलुकमा भ्रष्टाचारीलाई कडा कानुनको व्यवस्था हुन्छ । विभिन्न देशअनुसार भ्रष्टाचारीलाई त्यस देशको सरकारले कडा कानुनको व्यवस्था तोकेको छ । जस्तै खाडीमुलुकमा भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई फाँसीको सजाय हुन्छ । भने कुनै–कुनै देशहरूमा जनताहरूले लखटेर ढुङ्गाले हिर्काएर मार्छन भने, कुनै देशमा सरकारले गोली ठोकेर मार्छन् । यस्ता यस्ता कट्र कानुनले गर्दा नै हतपत बाहिरी मुलुकहरूमा भ्रष्टाचार हुन पाउँदैन । त्यस मुलुकमा विकास र समृद्धिले चाँडो छलाङ मार्छ । विकसित देशमा जनता सुखी भएमात्र राज्य सुखी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले गर्दा नै विकसित देशहरूमा सर्वप्रथम जनताको आधारभुत आवश्यक्तालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले हरेक किसिमको कदम चालेको हुन्छ । तर यहाँ त हरेक दिन जसो कुनै न कुनै ठाउँहरूमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गईरहेको अवस्था छ ।
राज्यले भ्रष्टाचार बिरोधी कार्यक्रम चलाउँछ तर केही समय भ्रष्टाचारको उन्मुलन भए पनि फेरि भ्रष्टाचार मौलाउँछ । यस्तो अवस्थामा कसरी मुलुक समृद्धि हुन सक्छ ? राज्यको तर्फबाट भ्रष्टाचारको विषयमा कडा कानुन ल्याउनु जरुरी हुन्छ । सानो ठूलो जुन होस् भ्रटाचार भ्रष्टाचार नै हो । चाहे राजनिति दलका नेता होस चाहे साना ब्यापारी नै किन नहोस कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई राज्यले उन्मुक्ति दिनहुँदैन । भ्रटाचार न्यूनीकरणका केही उपायहरू :
सरकारी तथा निजी संथानमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
जति पनि मुलुकमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू छन तिनीहरूको प्रत्यक ठाउँमा भ्रष्टाचारबिरुद्ध कार्यक्रम संचालन गर्ने । यसले गर्दा भ्रष्टाचार हुन पाउँदैन ।
अनुगमनमा तीव्रता दिने
सधैं दिनजसो हरेक कार्यालयहरूमा अख्तियारले अनुगमनमा तीव्रता दिने । यसले गर्दा भ्रष्टाचार हुन पाउँदैन । र कर्मचारीहरू सचेत रहन्छन् ।
बिचौलीयाहरूको प्रवेशमा निषेध गर्ने
विशेष गरी यातायात, मालपोत , भन्सार लगाएत ठाउँहरूमा बिचौलीयाहरूको प्रवेसमा पूर्णरोक लगाउने यसले गर्दा भ्रष्टाचार हुन पाउँदैन ।
भ्रष्टाचारीलाई कडा कानुनको व्यवस्था गर्ने
भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई पनि विदेशमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ । तर, यही कानुन पनि नेपालमा भएको भए सायद भ्रष्टाचार शून्यमा हुन्थ्यो होला तर बिडम्बना त्यो नियम हाम्रो देशमा छैन । यो नियम नभए पनि कडा कानुनको त व्यवस्था गर्न सकिन्छ नि ।
५) सुरक्षा निकाएलाई पनि संयमित हुन आग्रह गर्ने
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले हरेक सुरक्षा निकायलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्नुपर्छ । तब मात्र भ्रष्टाार न्यूनीकरण हुन्छ । सुरक्षा निकाय जति संवेदनशील हुन्छन् त्यति नै भ्रष्टाचार कम हुन्छ ।
हरेक सरकारी कार्यालयहरूमा सीसी क्यामरा जडान गर्ने
जनताको सेवा गर्ने हरेक सार्वजनिक संथानहरूमा सीसी क्यामराको जडान गरेमा सेवा ग्राहीले कार्यस्थलभित्र घुसपेठ गर्न पाउँदैनन् । सबै कुरा क्यामरामा रेकर्ड भएकाले गर्दा पनि सीसी क्यामरा जडान हुनु जरुरी छ ।
लेखापरीक्षणमा पनि संवेदनशील हुनुपर्छ
हरेक सरकारी तथा गैर करकारी कार्यालयहरूमा जति पनि वार्षिक रूपमा हुने लेखापरीक्षण छन् ती सबैको संवेदनशील रूपमा र गम्भीर रूपमा भएर लेखापरीक्षण गरिनुपर्छ । लेखापरीक्षण नै हो कम्पनीको आय व्यायको परीक्षण हुने ।
कारोबार गर्दा जहिले पनि भ्याट बिलबाट कारोबार गरौं र बिल लिने बानी गरौं
हरेक व्यवसायीले आफनो कम्पनिको मात्र भ्याट बिल प्रयोग गर्नुपर्छ । कारोबार गरिसकेपछि उपभोक्ताले पनि भ्याट बिल लिने गर्नुपर्दछ । नत्र ठगिने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
यी त भए एउटा भ्रष्टाचार न्युनिकरण गर्ने केही उपायहरू मात्र । तर केलाउँदै जाने हो भने हाम्रो देशमा बिभिन्न क्षेत्रमा देखेर वा नदेखेर हुने भ्रष्टाचारहरू धेरै छन् । देशको राज्य व्यवस्था र देशको कमजोर सुरक्षा प्रणालीले गर्दा मानिसहरू आफ्नो दैनिकी घरपरिवार चलाउन कुनै न कुनै बहानामा आम मानिसहरूबाट सोझासाझा मानिसहरूबाट भ्रष्टाचार गर्छन् । यतिसम्मकि कुनैै सानो काम गर्नुपर्दा यति रकम उति रकम भनी मोल तोल गर्छन । बिचौलीयाहरूको साथ लिन्छन् । कुनै पनि कार्यालयहरूमा सानोतिनो काम गर्दा खुलेआम पैसाकै कुरा गर्छन । अनि कहाँबाट मुलुक समिृद्धि हुन्छ ? भ्रष्टाचारको न्युनिकरणको लागि तपाईहामी सवैले आवाज उठाउनु जरुरी । केहीदिन अघिको मात्र घट्ना हो,नेपाल प्रहरीका निरिक्षक –(इन्सपेक्टर)जयनेपाल थापा घुस लिँदालिदै पक्राउ परेको बिभिन्न संचार माध्यममा सार्वजनिक भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलिले ४० हजार घुस सहित उनलाई पाटन बाट पक्राउ गरिएको हो । बैदेशिक रोजगारीको प्रयोजनका लागि ४० हजार घुस लिँदै गरेको अवस्थामा उनी पक्राउ परेका हुन । भने प्रहरीले समेत उनी पक्राउ परेको पुष्टि गरेका हुन् । उनी महानगरीय अपराध महासाखामा कार्यरत १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को सुरक्षाका लागि सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदको परिसरको कमाण्ड पोष्टमा परिचालन गरिएको भन्ने बिभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकासन तथा प्रसारण भएको थियो । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । आज भन्दा धेरै पहिला १० औं वर्ष पहिले पनि राज्यका उच्च पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचार काण्डमा जेल गएको उदाहरण नै छन् । एउटाको सानो गल्तिले सुरक्षाजस्तो जिम्मेवार ठाउँमा जनताको प्रतिष्ठत ठाउँमा त प्रश्न गर्ने बाटो राख्छन् भने स सानो तह र तप्काका कर्मचारीहरूले किन भ्रष्टाचार गर्दैन त ? केही महिनाअघि मात्र बाराका सरकारी कर्मचारी नायब सुब्बाले गरेको करोडौं भ्रष्टाचार । धेरै सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भयो । यसरी दिन दिनै भ्रष्टाचारको समाचार आइरहने हो भने सायद मुलुकमा ठूलो भ्रष्टाचारको खाडल बन्न पुग्छ ।
विगत १० वर्ष अगाडिलाई फर्केर हर्ने हो भने पनि बिभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले हरेक भाषण हरूमा मुलुकलाई सिङ्गापुर, स्विट्जरल्याण्ड बनाउँछु भन्छन् के यही हो त सिङ्गापुर स्विट्जरल्याण्ड भएको ? हरेक नेपालीको टाउकोमा अहिले प्रतिव्यक्ति ३५हजार रुपैयाँ क्रण थुप्रेको छ । जब चुनाव आउँछ अनि हरेक दलका नेताहरू घरदैलो धाउने गर्छन् । मुलुकलाई यो बनाउँछु त्यो बनाउँछु ठूला–ठूला विकास र समिृद्धिका कुरा गर्छन् । अन्त्यमा सरकारको प्र्रतिनिधित्व गरेर जान्छन् अनि हुन्छ भ्रष्टाचार । जबसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन तबसम्म मुलुक समृद्धि हुन सक्दैन । अब भ्रष्टाचारको अन्त्य भनेको तपाई हामीले नै गर्ने हो । मुलुक समृद्धि बनाउन तपाईं हामीबाट नै सुरु गर्ने हो ।
किसानको दुध बिकेन